मस्यौदामा दलित | Nepaldalitinfo International
– ओमप्रकाश भी.के. गहतराज*
संविधानको सुझाव संकलनका क्रममा कतिपय गैरदलितले दलित शब्दको विरोध गरेको देखियो, सुनियो । यो स्वरले दुइटा अर्थ बुझाउँछ । यात दलित शब्दको आडमा यो समुदायले आरक्षण लिएको सहन सकिएन या दलित शब्द घृणित शब्द भयो, सभ्य शब्द भएन । पहिलो अर्थ हो भने यो समुदायलाई सर्वप्रथम दलित अवस्थाबाट मुक्त गर्नुपर्‍यो । त्यसपछि यो शब्द हटाउन सकिन्छ । अहिलेकै अवस्थामा कुनै समुदायले राज्यसत्ता र सधानस्रोतमा ७०–७५ प्रतिशत कब्जा गर्ने र दलितलाई १ प्रतिशत पनि नदिने हो भने दलित शब्द हट्न सक्दैन । दोस्रो अर्थ हो भने दलित शब्दको सट्टा यो समुदायलाई सम्बोधन गर्ने जुनसुकै सभ्य शब्द ल्याए तापनि २/४ वर्षपछि त्यो नयाँ शब्दलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि उही दलित शब्दकै जस्तो हुन्छ । जतिसुकै शब्द परिवर्तन गरे तापनि जबसम्म गैरदलितले दलितलाई हेर्ने पुरातनवादी दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउँदैन, तबसम्म यो समस्या रहिनै रहन्छ । छिमेकी राष्ट्र भारतमा सबैको सेवा गर्ने जातिलाई अछूत भनेर समाजमा घृणा गरेको देख्दा गान्धीजीलाई पीडा भयो र यो जातिलाई पवित्र शब्दले सम्मान गर्न अछूत शब्दलाई विस्थापित गर्न हरिजन (भगवान् विष्णुको सन्तान) शब्द दिनुभयो र यही हरिजन शब्दको प्रचार अभियानमा लाग्नुभयो । तर आज त्यही भारतीय समाजमा हरिजन भन्ने बित्तिकै पुरातनवादी गैरदलितहरूको व्यवहार उहि छ । त्यसैले कुनै पनि शब्द आफैमा पवित्र छ, शब्दको दोष छैन, त्यसलाई हेर्ने दृष्टिको दोष छ । अत: नेपालमा पनि दलित शब्दलाई अप्ठ्यारो वा असहज मान्नुको कुनै औचित्य छैन ।
*गहतराज नेपाल दलित संघका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
प्रकाशित: www.ekantipur.com दृष्टिकोण» २०७२ श्रावण ७ ०८:२८
By nepaldalitinfo International, on July 24, 2015 at 10:02 am, under General, New Constitution of Nepal, Perspectives & Analysis. No Comments
« Dalits in New Constitution in Nepal
मस्यौदामा दलित अधिकार »